Malunga nathi-I-NINGBO BOLT MACHINERY Electronics kunye NOBUGCISA CO., Ltd
Inkampani yethu, i-NINGBO BOLT MACHINERY Electronics & COCHNOLOGY CO., Ltd ngumenzi oqeqeshiweyo e-China ogxile ekuveliseni i-airbrush, i-mini air compressors, umpu wokutshiza, ibrashi yomoya nezinye izixhobo zomoya.
Ngaphakathi kwe-15years yamava kulo mgca, ngoku sithumela kwelinye ilizwe kwihlabathi liphela.
Lo mzi-mveliso ugubungela indawo engama-20,000 ㎡ yomhlaba, inabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nemveliso yangaphambili kunye nezixhobo ezintle zovavanyo. Sinikezela ngempahla ekumgangatho ophezulu ngexabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo ngokunyaniseka.
Kukho abasebenzi abangama-88 kumzi-mveliso wethu, amandla ethu ziiseti ezingama-30,000 zenkqubo yokwenza izinto kunye ne-50,000pcs yee-airburhs kunye ne-30,000pcs ye-mini air compressor iyonke.
Inkampani ebekwe kwisixeko esidumileyo sedolophu - I-Ningbo. Iimveliso zethu zivunyiwe ziikhrayitheriya ze-CE kunye ne-GS kwaye zifumane amalungelo obunini emveliso. Iimveliso zethu zilungele ngokukodwa ukujongwa kwe-Airbrush, tattoo, i-t-shirt, ibrashi yebrashi, uyilo lobugcisa, isitshizi sentengiso, njalo njalo.